I-Nomad isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-20% kwicandelo layo lokuthengisa | Ndisuka mac
I-Nomad isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-20% kwicandelo layo lokuphuma
UNomad yenye yeefemu esihlala sicebisa ukuba kuthi thina bangaziyo ukuhlala kunye nezixhobo zeMac, i-iPhone, iApple Watch, ii-AirPods nabanye. Kule meko inkampani yongeza icandelo lemveliso kwicandelo layo lokuphuma ngesaphulelo sama-20%
Kweli candelo sinokufumana kwi Iziseko zokutshaja zikaNomad, ngamanye amaqhosha anawo kwikhathalogu yawo ebanzi kunye namatyala e-AirPods Pro. Ngokusengqiqweni ezi mveliso ayizizo ezona zintsha zisungulwe kwi-Nomad kodwa ngokuqinisekileyo uya kuzifumana ezinokunceda.
Ixabiso lezi zincedisi linomdla wokwenene, ke sicebisa ukuba uqhubeke iwebhusayithi yabo kwaye ujonge uluhlu lwezinto abanazo. Ukuba nayiphi na inokuba luncedo kuwe, ungacingi ngayo kuba ezi mveliso ziyaphelelwa njengoko zithengiswa.
Isaphulelo ngakumbi usebenzisa le khowudi
Kodwa ayisiyiyo yonke le nto. Kwaye kunjalo ukuba usebenzisa ikhowudi "springcleaning" Ngexesha nje lokuhlawula, kuya kusetyenziswa isaphulelo esongezelelekileyo kuyo nayiphi na imveliso kwaye sinokuthenga ityala ngee-AirPods zesikhumba eNomad ngaphezulu nje kweedola ezili-12. Ngokucacileyo kuya kufuneka ukubala ukuthunyelwa kunye nabanye kamva, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo kuyonwabisa ukufumana ezi zaphulelo kwiimveliso ezihlaziyiweyo ezinje ngezinye zeziseko zokutshaja abanazo kweli candelo okanye njengezikhuselo kunye nemitya yeApple Watch nyani amaxabiso aphantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Nomad isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-20% kwicandelo layo lokuphuma
I-Apple yenza ngokusebenzisana noRobert Redford ukhuphiswano lwefilimu kwindalo esingqongileyo kubantu abancinci